BlackArch linux 2020.01.01 ikozvino yave kuwanikwa neLinux 5.4.6 | Linux Vakapindwa muropa
BlackArch 2020.01.01 ikozvino yave kuwanikwa neLinux 5.4.6 uye anopfuura zana nemakumi maturusi maturusi
Pakati peLinux-based operating system, kune ese marudzi esarudzo. Pakati pavo, pane imwe inozivikanwa sekubira kwetsika, ayo ari kushanda masystem ayo, mukufunga, akagadzirwa kuyedza kuchengetedzwa kwemakomputa edu. Pakati pezvipo izvi, imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndeye Kali Linux, asi kune vamwewo vakaita seiya yakatovhura vhezheni yekutanga ya2020. Kuti unyatsojekesa, zviripo kubva nhasi ndizvo NhemaBlackArch Linux.
Iyo vhezheni yakatangwa nhasi inosvika pamwe nekuverengera kwaNdira 1, 2020 uye inoita saizvozvo mwedzi mitatu mushure meiyo NhemaBlackArch Linux yakaburitswa muna Nyamavhuvhu gore rino. Kufanana nekuburitswa kwese, kuendesa uku kunouya nezvakawanda zvitsva maficha, pakati pazvo isu tine yazvino vhezheni yeLinus Torvalds kernel, Linux 5.4.6, uye kupfuura Zvishandiso 120 zvitsva. Pazasi iwe une runyorwa rweakatanhamara matsva anouya pamwe neshanduro iyi.
Zvakaitika zveBlackArch Linux 2020.01.01
Wakawedzera zana nemakumi maturusi.
Wakawedzera rutsigiro rweTerminus font kune lxdm.
Yakagadzirisa bug inotsamwisa yemessage "zvishandiso hazvigone kuvhurwa kuburikidza ...".
Gadziridza iyo inosimudza blackarch-inosimudza kushanduro 1.1.34.
Kugadziriswa kwakagadziridzwa urxvt kuwedzera rutsigiro rwekukurumidza kushandura saizi.
MuVim, yakatsiviwa utachiona game Vhura.vim uye plugin nyowani inonzi clang_complete.
Kugadziriswa kudiki uye kugadzirisa.
Mapakeji ese akagadziridzwa nekugadziriswa, kusanganisira BlackArch Linux zvishandiso, mapakeji avo (kusanganisira ekugadzirisa mafaira), ese system mapakeji, uye ese emawindo maneja mamenyu (anotyisa, fluxbox, uye openbox).
Shanduro nyowani ikozvino iripo kubva Iyi link, kwatinokwanisa kurodha mifananidzo mitsva yeIO neOVA. Kune izvo zvisina kujairika, OVA mifananidzo inogona kushandiswa mukushandisa system yekuteedzera software yakadai seVirtualbox.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » BlackArch 2020.01.01 ikozvino yave kuwanikwa neLinux 5.4.6 uye anopfuura zana nemakumi maturusi maturusi
Chikamu chekutanga kuverenga. Maitiro ekushandisa Photo Kuverenga muLinux
Iyo supercomputer neKubuntu yakaziviswa ye2020